About Unity Real Estate
ကျွန်ုပ်တို့၏ ယူနီတီအိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၈)ရက်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ် ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပါသည်။ ယူနီတီကုမ္ပဏီ ကို ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၊ အထွေထွေမန်နေဂျာ၊ ဈေးကွက်မန်နေဂျာ၊ အုပ်ချုပ်မှုမန်နေဂျာ၊ ဥပဒေအကြံပေးများ၊ ဘဏ္ဍာရေး မန်နေဂျာ၊ Marketing ၀န်ထမ်းများဖြင့် ကုမ္ပဏီကို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
ယူနီတီအိမ်ခြံမြေကုမ္ပဏီ စတင်တည်ထောင်ရာတွင် ရန်ကုန်မြို့လယ်၊ အောင်ဆန်း ကွင်းမြောက်ဘက်၌ စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီး ယခုဆိုလျှင် ( ၂၂ )နှစ် ကျော်ခဲ့ပါပြီ။
ကုမ္ပဏီ၏ ရုံးချုပ်တည်ရှိရာလိပ်စာမှာ အမှတ် (G-1)၊ အောင်ဆန်းကွင်းမြောက်ဖက်တန်း၊ ကန်တော်ကလေးလမ်း၊ မင်္ဂလာေ တာင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ယူနီတီရုံးခွဲ (Branch Office) အဖြစ် တိုက်အမှတ် (၁၁၀)၊ အခန်းအမှတ် (၃)၊ မြေညီထပ်၊ ပြည်လမ်း၊ (၈)မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
ယူနီတီအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ၏ အဓိကဆောင်ပုဒ်မှာ “ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်ယူနီတီ” (Straight forward to Unity) ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
ယူနီတီအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်းများသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းအရ သိပ်သည်းကျစ်လစ်ခြင်း၊ ၀န်ထမ်းများ၏ စည်းကမ်း၊သစ္စာ၊သမာဓိ နှင့်ရိုးသားကြိုးစားစွာဆောင်ရွက်မှု ကြောင့်ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ၏ မျိုးဆက်များကို အခိုင်အမာ တည်ဆောက်ထားသော ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် အခိုင်အမာရပ်တည်လျှက်ရှိပြီး ခေတ်စနစ် အခြေအနေအရ အပြောင်းအလဲများတွင် နိုင်ငံတော်၏ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုအခြေခံ၍ ယူနီတီအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် လုပ်ငန်းကို ခိုင်ခိုင်မာမာကတိသစ္စာတည်ကြည်စွာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနေသော လူကြီးမင်းတို့ထံ သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။
BACKGROUND HISTORY OF UNITY REAL ESTATE CO; AND PROCESS
Our Unity Real Estate Co., was established on 18th August , 1996. Our company was registered at Companies Registration Office as Service Company. As it said Company, Unity company is solidly organized as Boards of Directors, General Manager, Marketing Manager, Admin Manager, Legal Consultants, Finance Manager , Marketing Staffs.
Unity Real Estate Company was systematically organized & formed in the centre of Yangon, Aung San Stadium Northern Side and now it is exactly (22) years.
Unity Company Head Office’s Address is No . (G-1), Aung San Stadium Northern Side, Kandawgalay Street, Mingalar Taung Nyut Township, Yangon. Unity Branch Office was situated No . (110), Room No . (3), Ground Floor, Pyay Road, 8 mile, Mayangone Township, Yangon and was founded in December, 1999.
Significant Slogan of our Unity Real Estate Service Company is "Straight forward to Unity".
Being Staff of Unity Real Estate Service Company is united according to fundamental rule and due to discipline, faith and honesty of staff, this company firmly established the generation of competent staffs. Firmly located in the centre of Yangon. On Market Economy Policy of State, we conveyed to you, Unity Real Estate Services Company is doing profession with firm and faith.
New Yadanar St.
95-1-394725, 394537, 394080, 379812, 09-2042098, 09-5000575, 0973058732, 09-73068903
No. G-1, Aung San Stadium Northern Wing, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon, Myanmar.
95-1-651512, 652040, 653310, 09-43146513, 09-43064532, 09-73070467
No.110, Room(3), G/F, Pyay Road, (8)Mile, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.